इलाम बाट फर्किंदा छुर्पी , चिया र ललिपप मिठाई लिएर आउनु है ! - Nayabulanda.com
नयाँ बुलन्द २५ पुष २०७६, शुक्रबार १६:४६ 218 पटक हेरिएको
इलाम :इलाम जति प्रख्यात छ त्यति नै प्रख्यात छ इलाम बजारको छुर्पी , चिया , घ्यु , अकबरे , सिलाम र ललिपप मिठाई !
इलाम जानु अर्थोडक्स चियाको चुस्की नलिइ, अकबरे खुर्सानी नकिनि , सिलामको अचार नखाइ र इलामको बम्बैसनको मिठाई र ललिपप को स्वाद नलिइ फर्किनेको संख्या लगभग शुन्य जस्तै नै छ । इलामको पर्याय हो चिया । इलामको प्रमुख नगदेबाली , इलामको सौन्दर्य , इलामकै माटोमा उमि्रएर, इलामे हातले तयार गरेको चियाको चुस्कीले सबैको मुहारमा खुशी ल्याउँदछ र मुख बाट निस्कन वाह ! चिया भनेको त यस्तो हुनुपर्छ !
तपाईं जब इलाम टेक्नुहुन्छ, बोत्तलभरी सजाइएको अकबरे खुर्सानी, डोरीमा टाँगिएको छुर्पी, सिलसिला मिलाएर राखिएको चिया, सिलामले हठात् तपाईंको ध्यान खिच्नेछ । यससँगै समावेश हुन्छ, ललिपप र बम्बईसन । यहाँको अर्थ र पर्यटन बजारलाई एकमुष्ठ सम्बोधन गर्ने कुरा हो, इलामको कोसेली । इलाम पुगेर तपाईं जता-जता आँखा घुमाउनुहुन्छ, त्यही देख्नुहुनेछ अकबरे खुर्सानी, चिया, छुर्पी ।
इलाम कृषि उत्पादनको लागि कहलिएको छ । यहाँको माटोमा अकबरे खुर्सानी, अमि्रसो -कुचो), अदुवा, आलुदेखि अर्किडसम्म फस्टाउँछ । इलामको कृषि उपजसँग ‘अ’ अक्षरको संयोग पनि गजबको छ । यहाँको रैथाने उत्पादनलाई चिनाउने नामको अघिल्लो अक्षर ‘अ’बाट सुरु हुन्छ । जस्तो, अर्थोडक्स चिया । अदुवा । अलैंची । अकबरे खुर्सानी ।
त्यसैले त भन्ने गरिन्छ, ‘इलाम पाँच ‘अ’को लागि प्रख्यात छ । पाँच ‘अ’मा अर्थोडक्स चिया, अलैंची, अदुवा, अमि्रसो -कुचो) र अकबरे खुर्सानी । यसमा अर्को ‘अ’ जोडिन्छ, ओलन । अर्थात दुध । इलाममा यस्ता गाउँ सायदै भेटिएला, जहाँ गाई पालन नगरिएको होस् । यस्तो घर नभेटिएला, जसले दुध व्यवसाय नगरेको होस् ।
यहाँ दुधजन्य परिकार पनि अहिले निकै चल्तीमा छ, छुर्पी, चिज, बम्बईसन र ललिपप । दुध र चिनीको मिश्रणबाट बन्ने ललिपप र वम्बईसनले अहिले इलामको ‘घरेलु उद्योग’लाई उकासेको छ । गाउँ-गाउँमा ललिपप बनाइन्छ । बम्बइसन बनाइन्छ । यी दुबै मिठाई यहाँको रैथाने ब्रान्ड भएको छ ।
इलाम आर्थिक एवं सामाजिक रुपान्तरणमा पर्यटन बलियो टेको बन्न सक्छ । किनभने यहाँ अनगिन्ती स्थान छन्, जसले पर्यटकलाई लोभ्याउँछ । चाहे झुल्के घाम हेर्ने श्रीअन्तु होस् वा गर्मी छल्ने कन्याम । सन्तकपुर, माइपोखरी, गजुमुखी, पाथीभरा (सानो), छिन्टापु जस्ता स्थलले बाह्रैमास पर्यटकको स्वागत गर्छ । पर्यटन विकासकै लागि यहाँ होमस्टेहरु सञ्चालनमा छन् । चिया पर्यटनबाटै पनि इलामले आगन्तुक भित्र्याउन सक्छ । अर्थात पर्यटनको आधार बनाएर पनि इलामले छलाङ मार्न सक्छ । यसका लागि खाँचो छ, पर्यटनमैत्री इलामको ।
दूधबाट बनिने यस्तो ललिपप मिठाई नेपाललगायत सिमापारी भारतीय बजारमा पनि निकासी हुादै आएको छ । महिलाहरूले आफ्नै निजी लगानीमा उक्त ललिपप उद्योग खोलेर नाफा पनि स्वयं लिादै आएका हुन् । उद्योग बढ्दै गएपछि बजार अभाव भएको छ । जसको कारण आशा गरे जस्तो आम्दानी भने लिन नसकेको उद्यमीको गुनासो पनि आउने गरेको छ ।